Mhedzisiro yeLinux ine lightweight distro yakavakirwa paSlackware | Linux Vakapindwa muropa
Mhedzisiro yeLinux kugoverwa kwakaringana kwakavakirwa paSlackware, kugovera uku kuri pamusoro inoenderana neshanduro yeSlackware saka ndoda chero package inogona kushandiswa yeshanduro imwechete.
Mhedziso Linux inosanganisira zvakasiyana siyana zvinoshandiswa izvo zvinouya kurerutsa kumisikidza uye kugadzirisa. Inosanganisira maapplication kune yakajairika desktop uye internet uye yakagadzirirwa nekubatanidzwa kwakasimba kwemamenyu, kunyorera, uye MIME mhando.
Iyi 64-bit Linux kugoveraKunyangwe kare yaibatawo makumi matatu nematatu, inongobata ichi chivakwa. Absolute Linux inoshandisa IceWM uye Rox yewindo rako uye manejimendi manejimendi, zvichiteerana.
1 Yakagadzika vhezheni yeiyo distro
1.1 Nyowani Beta vhezheni kune Ruzhinji
Yakagadzika vhezheni yeiyo distro
Panguva yekupedzisira yakagadzikana vhezheni iri 14.2.2 izvo yakavakirwa pa64-bit Slackware, kupi gadziridza Xorg vhezheni, mukuwedzera pakuchengeta chengetedzo uye kugadzirisa kunoshanda sekugadzirisa kune pulse odhiyo, network network maneja, manejimendi manejimendi.
Iyo yekumisikidza yakagadziriswazve kugadzirisa iko kukanganisa kwekusawana madhiraivha ekugadzirisa otomatiki.
Zvese zveSlackware zvinowedzeredzwa kuchirongwa chazvino chakabatanidzwa uye akasiyana mapurogiramu akadzoreredzwa kuti afambirane neshanduko dzekuvimbika.
Nyowani Beta vhezheni kune Ruzhinji
Nokuda kwayo iye mugadziri wekuparadzira uku aburitsa vhezheni itsva beta kuvanhu inova 15.0, kwaunogadziridza iyo Linux kernel, pamwe nekubatanidzwa kwemhinduro de ikozvino fusion uye kuchengetedzeka nyaya dze scpecter, yeayo inobata maviri kubva matatu ekukuvara.
Parizvino ndicho chinhu chega chakagamuchirwa mukuburitswa uku, saka kana iwe uchida kubatsira pakuonekwa kwetsikidzi kana mukusimudzira kwavo unogona kurodha pasi ISO yeiyo system. kubva pano.
Kurudziro chete yandinogona kupa ndeyekuti izvozvi isu tinofanirwa kugara mune yayo yakagadzikana vhezheni uye inogara ichigadzirisa iyo Kernel uye yayo nyowani yakagadzikana vhezheni nekuda kwekuchengetedza nyaya dzakonzera kusagadzikana mumavhiki apfuura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Absolute Linux a lightweight distro yakavakirwa paSlackware